Kashiwa Station Tokyo(31st July)
English • Aug 1, 2021
8月31日、我々TTAJチームは、千葉県の柏駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週はRTM チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
また大変 お忙しい中、ご協力してくださったカメラマンの方々、お水やお菓子などサポートしてくださった寄贈者、TTAJのボランティア、皆様にも誠に有難う御座います。 🙏🙏
"Stay Strong Myanmar"
31th of July, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Kashiwa Station, Chiba.
We were able to hand out over 600 pamphlets and 600 pocket tissues from 3:30pm till 6:30 pm.
"အားတင်းထားပါ မြန်မာ" ✊🏻
ယမန်နေ့ ၇ လပိုင်း ၃၁ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Chiba / Kashiwa ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီခွဲမှ ၆ နာရီခွဲ အတွင်း
မွန်းတည့်နေပူကျဲတဲ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မငြီးမငြူဘဲ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ Volunteers များအတွက် ရေဘူးနှင့်မုန့်များ လှူဒါန်းပေးပါသောအလှူရှင်များ ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏💪🏻💪🏻